Buy Car Belt Support (4,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Car Belt Support
ကလေးများသာမက လူကြီးများကိုပါ အန္တရာယ်များတဲ
လမ်းမကြီးတွင် ခါးပတ် အမြဲ ပတ်နိုင်ဖို.
Car Belt Support လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
သက်သောင့်သက်သာနဲ. ခါးပတ် ပတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးပတ် မပတ်ရင် ဒါဏ်ငွေလည်း ရှိပြီး၊ အသက် အန္တရာယ်လည်း
ကား ခါးပတ် မပတ်ချင်တဲ ကလေးတွေ အတွက်
Car belt support လေးကို ဖုန်းဆက်မှာပြီး လက်ဆောင်
တစ်ခု – ၄ထောင်
သုံးခု – ၁သောင်း
အမည်: Car Belt Support